राष्ट्रपतिले प्रदान गर्ने प्रबल जनसेवाश्री पदवी सम्मान लिन जालिन् कि नजालिन् विष्णु माझी ? – Butwal 24 News
September 19, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on राष्ट्रपतिले प्रदान गर्ने प्रबल जनसेवाश्री पदवी सम्मान लिन जालिन् कि नजालिन् विष्णु माझी ?
काठमाडौं । सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा ९ सय ३ जनालाई विभिन्न मानपदवी र विभूषण प्रदान गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा ९ सय ३ जनालाई मानपदवी, अलंकार र विभूषणबाट सम्मान गरेकी हुन् ।
त्यस्तै लोक गायिका विष्णु माझीलाई प्रबल जनसेवाश्री पदवीबाट सम्मान गरिने भएको छ । विष्णु माझीलाई प्रबल जनसेवाश्री पदवीबाट सम्मान गरिने भएपछि अहिले सबैको ध्यान गायिका विष्णु माझीतर्फ गएको छ । आफ्नो विवाहपछि गुमनाम भएकी विष्णु माझी राष्ट्रपति भण्डारीले प्रदान गर्ने प्रबल जनसेवाश्री पदवी सम्मान लिन आउछिन की आउदिनन् भन्ने सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।उनको चरी जेलैमा गीतको सुटिङमा उनी आएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । त्यसमा उनले अनुहार छोपेर आएकी थिइन् । स्टुडियोमा पनि कोठा अँध्यारो बनाएर गीत गाउने गरेकी छिन् ।
गुगलमा विष्णु माझीको तस्बिर खोज्ने हो भने एउटा मात्रै भेटिन्छ । कालो, रातो अनि बीचमा थोरै हरियो पुवाँलोको माला । चिल्लो पारेर कोरेको कपाल अनि आकाशे रंगको सामान्य फूलबुट्टे सारीमा सजिएको एउटा उज्यालो अनुहार । यही एउटा तस्बिर छ, जसले १५ वर्षदेखि गायिका विष्णु माझीलाई प्रतिबिम्बित गर्दै आएको छ ।
माधव नेपालका पितालाई प्रबल, प्रचण्ड पत्नीलाई प्रसिद्ध जनसेवाश्री
काठमाडौँ – संविधान दिवसका असरमा ९०३ जनालाई मान-पदवी, अलंकार र पदकबाट विभूषण गर्ने घोषणा सरकारले आइतबार गरेको छ।९०३ जनाको सूचीमा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका दिवंगत पिता र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’पत्नीको नाम पनि समावेश छ ।
माधवका पिता स्वर्गीय मंगलप्रसाद उपाध्यायलाई प्रबल जनसेवाश्री पदक घोषणा गरिएको छ । उनको नाम प्रबल जनसेवाश्रीको दोस्रो नम्बरमा छ ।त्यस्तै, प्रचण्डकी बिरामी पत्नी सीता दाहाललाई राजनीतिक अभियन्ताका रूपमा प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री प्रदान गरिने भएको छ ।